स्वर्गद्वारी आश्रमको महिमा-शक्ति यज्ञको रौनक | नेपाल दर्शन
१ चैत २०७६
आश्रम प्युठान जिल्लाको सदरमुकाम खलंगाबाट करिब २६ किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । नेपालका प्राचीन मन्दिरहरूमध्ये यो मन्दिर पनि एक मानिन्छ । पौराणिक कालमा पाण्डवहरू स्वर्ग जाँदा यहाँको बाटो भएर गएको जनविश्वास रहि आएको छ । पाण्डवहरू स्वर्ग गएको द्वार हुनाले यसलाई स्वर्गद्वारी भनिएको हो । यहाँ परापूर्व कालमा ऋषिहरू बसेर तपस्या गर्ने गरेको र भगवान ब्रह्मा स्वयंले यहाँ तपस्या गरेको भन्ने पौराणिक मान्यता छ । स्वर्गद्वारीमा ऐतिहासिक अग्निखण्ड, गुफा, महादेव स्वर्ग गएको बाटो, यहाँ पालिएका गाई, महाप्रभुको दर्शन गर्नाले हुनाले भक्तजनहरुको यहाँ घुइँचो लाग्ने गर्दछ ।
यहाँ दर्शन गर्नाले पुण्य मिल्ने र मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ । वैशाख पूर्णिमा, बुद्धजयन्ती र उभौली पर्वको अवसरमा स्वर्गद्वारीमा हरेक वर्ष ठूलो मेला लाग्छ अन्य समयमा पनि स्वर्गद्वारी जानेहरू प्रशस्तै भेटिनछन् । सत्य युगमा देवताहरुले यात्रा गरेको तपोभूमिमा रोल्पा जिल्लाको रुम्टी गाँउमा वि.स. १९१६ मा जन्मनुभएका १०८ महाप्रभु बालतपस्वि श्री नारायण गौतम १९५१ मा स्वर्गद्वारीमा आयपछि वेदका मन्त्रद्वारा अग्नी प्रज्योलित गरी १९५२ वैसाख पूर्णिमा देखि अखण्ड महायज्ञ सुरु गर्नु भएको हो । जुन विश्व शान्तीको लागि संचालित अखण्ड यज्ञ हाल सम्म निरन्तररुपमा अग्नी बलिरहेको छ ।
(गुप्तीसागर) स्वर्गद्वारीको उच्चटाकुरामा एउटा गुफा रहेको छ उक्त गुफा बाट प्रभुले स्नानको निम्ति २३०० मिटर तल लुग्रीं माडीको दोभानमा झर्नु भई सोहि द्वार मार्फत नै फिर्ता हुने गर्नु हुन्थ्यो भन्ने चलन छ र हाल उक्त गुफाको द्वारलाई स्वर्गको द्वार (स्वर्ग जाने बाटो) र गुप्तीसागर भन्ने चलन छ । यो द्वार खोज र अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ । स्वर्गद्वारीको महत्व प्रभुलाई शिवकोे अवतार मानिन्छ । स्वर्गद्वारीमा हिन्दुहरुका सम्पूर्ण पुजा, अग्नी को हवन गर्ने विधिविधानबाट सञ्चालित विश्वको एकमात्र हिन्दुहरुको संस्कार अनुसार चलेको स्वर्गद्वारी मात्र रहेको शंकराचार्य जयन्द्र सरस्वतीले स्वर्गद्वारीको भ्रमणमको क्रममा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
साथै समतल टाकुराबाट हिमसिखरहरु र रमणीय दृष्य अवलोकन गर्ने स्वर्गद्वारी मा पुग्दा साच्चै स्वर्गको अनुभूति गर्न सकिन्छ । हवनकुण्ड वेदद्वारा अग्नि स्थापना गरि प्रज्जवलित दिप हालसम्म निरन्तर अग्नि जलिरहेको छ भने दिनमा २ किलो घ्यू द्वारा पुँजा गरिरहने हवनकुण्ड आश्रम भित्र रहेको छ । बेद गुरुहरुद्वारा पुँजा गरिने उक्त हवनकुण्डको विभुति प्रसादीको रुपमा ग्रहण गरिन्छ । उक्त विभुति ग्रहण गर्दा रोग व्याधि नलाग्ने विश्वास छ ।
स्वर्गद्वारीमा हाल गाई गोरु १५० र भैसी २५ वटा रहेका छन् । २० वर्षअघि करिव एक हजार गाई आश्रममा रहेका थिए । यिनीहरुको पालनपोषण गर्न ३० जना ग्वालाहरु रहेका छन् । दुध घ्यूबाट आश्रमको नित्य पुजा र आउने पाहुनाहरुलाई चियाको व्यबस्था गर्ने गरिएको छ । साथै करिव १०० रोपनी जग्गामा गाई भैसीको गोवरबाट अत्यन्त मलिलो माटोमा उत्पादन हुने भाजी साग को साथ आउने भक्रजनहरुलाई निशुल्क भोेजनको व्यवस्था गरिएको छ ।
आश्रमभित्र गणेश पञ्चाङ, शिव पञ्चाङ्ग, देवीपञ्चाङ, सूर्यपञ्चाङ्ग, विष्णुपञ्चाङ्ग गरी ५ कुण्डहरुमा वैदिकविधी पूर्वक दैनिक ३ पटक पुँजा गरिन्छ ।
तिहारको औसीका दिन र दशैको फूलपातीका दिन प्रभुको सम्झनामा देश विदेशबाट आएका हजारौ हजार भक्तजनसमेतको उपस्थितिमा प्रभुको रथयात्रा निकाल्ने प्रचलन रहेको छ ।
आश्रमदेखि माथि पट्टिको डाडामा शिद्धबाबाको मन्दिर रहेको छ र त्यसमा महिनाको पहिलो आईतवार पुजा गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
आश्रमको आम्दानीबाट आश्रम भित्रनै वेद पाठशालाको स्थापना गरिएको छ । वेद गुरुद्वारा पढाइने उक्त पाठशालामा हाल सयौंको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन । उक्त जनशक्तिहरु आश्रमकै लागि तयार गरिन्छ र त्यहा वेद, रुद्री, चण्डी, अग्नि र अमरकोषको अध्यापन गराईन्छ ।साथै आधुनिक बिषयहरु पनि अध्ययन अध्यापन गराइन्छ।
स्वर्गद्वारी आश्रम प्यूठानको २६०० रोपानी जग्गा बाहेक दाङ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा १०५० विघाह जमिन रहेको छ । त्यहाँबाट उत्पादन हुने खाद्यान्नबाट स्वर्गद्वारीको दर्शनमा आउने भक्तजनहरू र त्यहाा कार्यरत सम्पूर्णलाई निशुल्क भोजन र आवासको व्यवस्था गरिन्छ । सम्पूर्ण व्यवस्थापन हेर्ने एक जना व्यवस्थापक र स्टोर हेर्न एक जना भण्डारेको व्यबस्था छ ।।
आउने भक्तजनहरुलाई प्रसादीको छुट्टै व्यवस्था आश्रमले गर्दै आएको छ ।
मुख्य मेला लाग्ने दिनः
आश्रममा मुख्य मेला वैशााख पर्णिमा, जेष्ठ, भाद्र, कार्तिक र माघे सक्रान्तिमा लाग्ने गर्दछ र यहाँका मुख्य तिर्थयात्रीहरु भारतका उत्तर प्रदेश र विहारक्षेत्रका रहेका छन भने नेपालका आन्तरिक तिर्थयात्रीहरु रहेका छन ।
हाल बिगत एक वर्ष देखि श्री स्वर्गद्वारी आश्रमको शाखा देउखुरी वनगाउँमा श्री स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठानका पीठाधीश स्वामी श्री भागवतानन्द गिरीजी महाराजद्वारा एक बर्षसम्म अविच्छिन्न रुपमा अनुष्ठान गरिएको श्री शक्ति उपासना महायज्ञको पुर्णाहुति महोत्सव कार्यक्रम भब्यताका साथ सम्पन्न गर्न गराउन आश्रमको आधिकारिक सम्बद्ध अधिकारीहरु, आश्रमसम्बद्ध बटुकहरु,भुपु विद्यार्थीहरु एवं आश्रम सम्बद्ध भक्तजनहरु बिगत 18/20 दिन अगाडी देखिनै अनवरतरुपमा खटिरहनु भएको छ। बिश्वशान्ती, लोककल्याणार्थ स्वामिजी द्वारा गरिएको सो अनुष्ठान अहिलेको विभिन्न संक्रमण जस्ता समाचारहरु एवं देखिएका भोगिएका रोगब्याधिहरु निर्मुल पार्ने अर्को एक अचुक अश्त्र समेत बन्नेमा सयौं को बिश्वास समेत रहेको छ। अहिलेको परिवेशमा जतिपनी नयानया रोग छन ती सबै बिकसीत देश बाटै फैलिरहेका छन आज कोराना भोलि थाहा छैन कुन निस्किन्छ ?? साइन्स हरेक रोगको उपचार पत्ता त लगाउन सक्छ तर उ सँग नया रोग उत्पन्न हुन नदिने उपाय भने देखिदैन।।
अब आउने हरेक नया रोग सरसफाइको कारण नभइ आधुनिकता , बिलासिता , अनिती र अधर्म नै प्रमुख कारण बन्ने छन ।।वैदिक सस्कार नै रोकथामको एकमात्र उपाय हो अन्यथा बिज्ञानको कुनै पनि आविष्कारले महामारीको आर्जिकल स्ट्राइक रोक्न सक्दैन।।।केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत छ।
HIV AIDS को कारण अबैध यौनसम्बन्ध जुन वैदिक सस्कारमा बर्जित छ।।।
सुनिन्छ जनावरको मांसले कोरोना फैलेको र सस्कारले अहिंसा जोड दिएको छ अर्काथरी भन्छन कि सर्प र चमेरोको जिन फ्युज भएर निस्केको र फरक प्रजातिबिचको सम्बन्ध पनि सस्कारमा बर्जित छ।। पिपलको रुखमुनी वा तुलसीको छेउमा दियो जलाउदा हजारौँ टन अक्सिजन उत्पन्न हुन्छ ।।
अन्न यज्ञ गर्दा बातावरणमा पवित्र र शुद्द वायु प्रसारित हुन्छ जसले ग्रीन हाउस इफेक्ट पनि कम गर्न र नियमत बर्षा हुदा वातावरण सन्तुलित हुन्छ।।
गाइको गोवर र गहुतमा किटाणु नासक वा जिवाणु नासक गुण हुन्छ कोराना भाइरस यसबाट हुन सक्दैन ।।
हुन त आफुले आफुलाइ आधुनिक ठान्नेहरु यस तथ्यलाई स्विकार्न तयार हुदैनन तर यो परम सत्य हो ।। जुन दिन बिनासको अन्तिम बिन्दुमा यो संसार पुग्नेछ तवमात्र यश सत्यलाइ स्विकार्न बाध्य हुनेछ्न ।।।
यी तमाम तथ्यलाइ नजिकबाट नियाल्दा पनि देवयज्ञ नै विभिन्न संक्रमण रोक्ने अचुक अस्त्र हो भन्ने निश्कर्षमा पुग्न कुनै शंकाको घेरामा रुमल्लिनुपर्ने अवस्था रहंदैन।
अत: विभिन्न भ्रमबाट हट्दै सकेसम्म सो महाअनुष्ठानमा सरिक भै। यथायोग्य लाभ उठाउनुहुन तमाम सज्जन भक्तबृन्दमा सादर अनुरोध का साथै स्वर्गद्वारी आश्रम सबैलाई आमन्त्रितका साथ स्वागत गर्दछ।